Zvishongedzo vatengesi uye fekitori - China zvishongedzo Vagadziri
Iye zvino muganho YAS
Yazvino limiter ndeyeyemunda wezvinhu zvemagetsi, chinhu chakakosha chinoshandiswa kudzikamisa zvazvino, hunhu hwayo ndechekuti ine yakaenzana mhete mhete, ndiyo musimboti wekuti musimboti wakakomberedza mhangura yakakosha rabha yakavharwa waya, ndiyo mhangura mhangura ye multicore epurasitiki package online online chinguva nhanho zvichiteerana kumisikidza magetsi magetsi interface, yakajairwa midziyo yemumba magetsi magetsi interface uye yekuvhenekesa magetsi magetsi interface.
Mafuta buffer YRB
Iko kushanda kwemafuta ekumanikidza buffer ndiko kudzikisa kudedera uye ruzha mune otomatiki mechina mashandiro, shandura iyo kinetic simba inogadzirwa nechinhu chinofamba kuita kupisa simba uye nekuisunungura iyo mumhepo, uye nekunyatso misa chinhu ichifamba.
Inoshandiswa kutakura mafuta edizili, parafini, mvura uye zvimwe midhiya.
Pfeka kuramba, diki inokombama radius, kurema uremu, kusimba kwakanaka, kukwegura kuramba, kushandisika
Ziva jenareta YZU
Vacuum jenareta chinhu chitsva, chinoshanda, chakachena, chine hupfumi uye chidiki chekutsvaira chinhu CHINOSHANDISA yakanaka mweya sosi kuburitsa yakaipa kumanikidza, izvo zvinoita kuti zvive nyore kwazvo uye nyore kuwana isina kunaka kumanikidza uko kune yakamanikidzwa mweya kana uko kune ese akanaka uye akaipa kumanikidza ari inodiwa mune pneumatic system. Vacuum jenareta anoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri otomatiki, senge michina, zvemagetsi, kurongedza, kudhinda, mapurasitiki uye marobhoti.
Mafirita ekutsvaira anounganidza zvinosvibisa (kunyanya guruva) rakatorwa kubva mudenga kudzivirira hutachiona uye rinoshandiswa pakati pemukombe wekuyamwa uye jenareta yekutsvaira (kana vharuvhu yekutsvaira). Mufflers ichaiswa mune yekuzadza chiteshi chevhavha jenareta, yekuyamwa chiteshi (kana pedza chiteshi) yevhavha vharafu uye pedza chiteshi chepombi pombi.
Bvisa chuck YZP
Vacuum Sucker, inozivikanwawo sevhavha yekuparadzira, ndeimwe yemidziyo yekuchenesa michina. Kazhinji, kushandiswa kwevhisi yekubvisa mukombe kubata zvigadzirwa ndiyo yakachipa nzira. Vacuum maswiti emarudzi akasiyana siyana. Rubha suckers anogona kuvhiyiwa pakakwirira tembiricha. Silicone suckers inokodzera kwazvo kubata zvigadzirwa zvine rough surface.Suction makapu akagadzirwa kubva ku polyurethane anogara kwenguva refu. Uye zvakare, mukugadzirwa chaiko, kana mukombe wekukweva uchidikanwa kuti usabatwe nemafuta, inogona kutariswa sekushandisa zvinhu zvakaita se polyurethane, nitrile butadiene rabha, kana ma polymers ane vinyl kugadzira mukombe wekukweva. dzivisa pamusoro peichi chigadzirwa chakakwenenzverwa, sarudzo yakanakisa inogadzirwa nenitrile rabha kana silicone rabha ine yekudhonzera kukaka mukombe zvinhu zvakagadzirwa ne nitrile rabha, ine simba rakakura rekubvarura, saka rinoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yakasiyana yekutsuka.
Pneumatic kuzvidzora muzvinhu zvakakosha, imwe-nzira nzira yekudzora zvikamu. Kazhinji inogadziridzwa pakati peyirinda nevharuvhu inodzosera kumashure, kuitira kuti mweya uri musilinda usapfuure nepavharuvhu inodzosera kumashure uye vharuvhu yakaburitswa yakananga.
Mapurasitiki ekudhonza ngetani sezita zvarinoratidzira ndeimwe mhando yekukweva ketani.Kuenderana nechimiro chinogona kukamurwa kuita zambuko repurasitiki dhonza cheni uye yakazara yakavharwa epurasitiki dhonza cheni; Zvinoenderana nemuenzaniso, inogona kukamurwa kuita diki cheni, general cheni uye hombe Maererano neruzha coefficient inogona kugoverwa mumagetsi ekudhonza uye chinyararire cheni; Maererano nechimiro chinogona kugoverwa mumaketani ekudhonza, kufanana-siyana kwekukwevera, S-rudzi rwekukanda ketani; Maererano nezvinhu zvakasvibirira zvakakamurwa kuva yepakutanga pasuru yepurasitiki uye yakadzokororwa mapurasitiki, nezvimwe.
Pressurized humburumbira inonziwo gasi-mvura yakamanikidzwa humburumbira
Pressure humburumbira inosanganiswa nezvakanakira humburumbira nesirinda uye kuvandudza dhizaini, oiri ye hydraulic uye yakasarudzika yekuzviparadzanisa, yakamanikidzwa mweya mu cylinder pisitoni tsvimbo yekutaurirana mushure mebasa rebasa otomatiki kutanga, kufamba kwekumhanya, kugadzikana, uye pneumatic transmission block block mudziyo uri nyore , iko kuburitsa kugadziridza kuri nyore, kunogona kuwana yakakwira simba ye hydraulic yekudhinda mune yakafanana mamiriro, yakaderera simba kudyiwa, inodzika kumhara haisi kukuvadza muforoma, nyore kuisa uye kuisa yakadzvanywa yekumanikidza humburumbira inogona kuve madhigirii mazana matatu mune chero Angle, iyo inogarwa nzvimbo iri diki, kushomeka kwekutadza kushanda kwekukwira kwetembiricha, hupenyu hwakareba, ruzha rwakaderera, uye zvimwe zvakakosha zvinhu.